Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, niaraka tamin'ny fivoaran'ny teknolojia fambolena holatra azo hanina, ny fanitarana tsy tapaka ny fambolena sy ny fitomboan'ny isan'ny karazan-javamaniry, ny holatra dia nanjary vola lehibe amin'ny famokarana fambolena. Ao amin'ny faritra maniry holatra dia be ny fako mivoaka isan-taona. Ny fanao amin'ny famokarana dia mampiseho fa ny fitaovana fananahana 100kg dia afaka mioty holatra vaovao 100kg ary mahazo 60kgfako sisa tavela amin'ny holatra mandritra izany fotoana izany. Ny fako dia tsy mandoto ny tontolo iainana ihany, fa miteraka fako be dia be koa. Fa ny fampiasana fako sisa tavela holatra hanaovana zezika biolojika dia malaza, izay tsy mahatsapa ny fampiasana fako fotsiny, fa manatsara ny tany amin'ny alàlan'ny fampiharana ihany koa.zezika biolojika zezika.
Ny residu holatra dia manan-karena amin'ny otrikaina ilaina amin'ny zana-ketsa sy ny fitomboan'ny legioma sy voankazo. Aorian'ny fermentation dia hatao zezika biolojika izy ireo, izay misy fiatraikany tsara amin'ny fambolena. Ka ahoana no ahalalan'ny sisa tavela ho lasa harena?
Fampiasana fermentation residue holatra hanaovana dingana fomba zezika biolojika:
1. Fatran'ny fatrany: ny 1kg an'ny mikraoba bitika dia afaka manangona 200kg sisa tavela amin'ny holatra. Ny poti-holatra sisa tavela dia tokony hotorotoroina aloha vao hasiana masirasira. Ny mikraoba mikitroka sy ny sisa tavela amin'ny holatra dia mifangaro tsara sy mifangaroharo. Mba hahatratrarana ny tahan'ny C / N mety, ny urea, ny zezika akoho, ny sesame na ny fitaovana fanampiny fanampiny dia azo ampiana araka ny tokony ho izy.
2. Fanaraha-maso ny hamandoana: aorian'ny fampifangaroana ireo sisa tavela amin'ny holatra sy ireo fitaovana fanampiny, aondraho mitovy amin'ny paompy rano ny rano ary ampodio tsy miova mandra-pahatongan'ny 50% ny hamandoan'ny akora. Ny hamandoana ambany dia hampiadana ny fermentation, ny hamandoana avo dia hitarika ho amin'ny tsy fahaizan'ny aeration amin'ny stack.
3. Fivadika compost: mamadika ny stack tsy tapaka. Ny microorganism dia afaka mampitombo mangingina sy manimba ny vatan'ny zavamananaina amin'ny alàlan'ny toetoetran'ny rano sy oksizena mety, ka miteraka hafanana be, mamono ireo bakteria pathogenika sy masomboly ahitra, ary mahatonga ny zavatra biolojika hahatratra fanjakana milamina.
4. Fanaraha-maso ny mari-pana: ny mari-pana hanombohana tsara indrindra amin'ny fermentation dia mihoatra ny 15 ℃, ny fermentation dia mety ho herinandro iray. Amin'ny ririnina dia ambany ny mari-pana ary lava kokoa ny fotoana fanamasinana.
5. Vita ny fermentation: zahao ny lokon'ny holatra holatra, mavo mavo io alohan'ny fermentation, ary volontany mainty aorian'ny fermentation, ary ny stack dia manana tsiranoka holatra vaovao alohan'ny fermentation. Ny fitaritana herinaratra (EC) dia azo ampiasaina hitsarana ihany koa, amin'ny ankapobeny ny EC dia ambany alohan'ny fanamasinana, ary nitombo tsikelikely nandritra nyfizotra fermentation.
Ampiasao ny sisa tavela amin'ny holatra aorian'ny fanamasinana mba hitsapana ireo faritra maniry any anaty laisoa sinoa, ny valiny dia naneho fa ny zezika biolojika vita amin'ny residu holatra dia manampy amin'ny fanatsarana ny toetra biolojika sinoa toy ny ravina laisoa sinoa, ny lava haben'ny ravina ary ny sakan'ny ravina dia ambony noho ny mahazatra. ary ny vokatra laisoa sinoa dia nitombo 11,2%, nitombo 9,3% ny atin'ny kôlôlôma, nitombo 3,9% ny atin'ny siramamy mety simba, nihatsara ny kalitaon'ny otrikaina.
Inona avy ireo anton-javatra tokony hodinihina alohan'ny hananganana orinasa mpamokatra zezika biolojika?
trano zavamaniry zezika biolojika mitaky fandinihana feno ny loharanon-karena eo an-toerana, ny fahaizan'ny tsena ary ny tariby fandrakofana, ary ny vokatra isan-taona dia amin'ny 40000 ka hatramin'ny 300.000 taonina. Ny vokatra isan-taona 10.000 ka hatramin'ny 40.000 taonina dia mety amin'ny zavamaniry vaovao kely, 50.000 ka hatramin'ny 80.000 taonina ho an'ny zavamaniry salantsalany ary 90 000 ka hatramin'ny 150.000 taonina ho an'ny zavamaniry lehibe. Ireto fitsipika manaraka ireto dia tokony harahina: toetra mampiavaka ny tany, toetoetran'ny tany, voly lehibe, firafitry ny zavamaniry, toetoetran'ny toerana sns.
Ahoana ny vidin'ny fananganana orinasa zezika biolojika?
Tsipika famokarana zezika biolojika kely kely dia kely ny fampiasam-bola, satria samy hafa ny akora fiovan'ny mpanjifa sy ny fepetra takiana amin'ny fizotry ny famokarana sy ny fitaovana, ka tsy omena eto ny vidiny manokana.
A feno tsiranoka famokarana zezika biolojika amin'ny ankapobeny dia misy andiana fizotry ny famokarana sy karazana fitaovana fanodinana, ny vidiny manokana na miankina amin'ny zava-misy marina, ary ny fampiasana ny vidin'ny tany, ny vidin'ny fanamboarana atrikasa ary ny vidin'ny varotra ary ny fitantanana dia mila dinihina miaraka amin'izay koa. . Raha mbola mifanaraka tsara ny fizotrany sy ny fitaovana ary voafantina ny safidin'ny mpamatsy tsara dia apetraka ny fototra mafy orina mba hahazoana vokatra sy tombom-barotra bebe kokoa.